ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (CITF)
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (ALTF)
NVC Card Process
Adopt an Area
Maps by District
Maps by Township
Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေးအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ စင်္ကာပူသံအမတ်ကြီးမှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား (NV Card) ထုတ်ပေးရေးနှင့် (National ID) စနစ်အတွက် (Biometric) နည်းဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ။
Published: 15 February 2018
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံစာ
Published: 13 February 2018
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား (NV Card) ထုတ်ပေးရေးနှင့် (National ID) စနစ်အတွက် (Biometric) နည်းဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
Published: 08 February 2018
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား ကနေဒါနိုင်ငံ၊ အွန်တေရေယိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ Hon. Robert Rae နှင့် ဂျပန်သံအမတ်ကြီးတို့က သီးခြားစီလာရောက်တွေ့ဆုံ
Published: 07 February 2018
We have 99 guests and no members online
Copyright © 2017 by Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine
http://rakhine.unionenterprise.org. All rights reserved.